हत्केलामा त्रिशूलको चिन्ह छ ? उसोभए छिट्टै चम्किदैछ तपाईको भाग्य ! – Gandaki Chhadke
काठमाडौं । ज्योतिषविद्याले भविष्यमा हुने शु’भाशुभ घ’टनाको जानकारी दिने बताइन्छ। हस्तरेखा ज्योतिषमा ह’त्केलाको रेखा र बनावट हेरेर भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। भारतको उज्जैनकी हस्तरेखा विशेषज्ञ डा विनिता नागरका अनुसार, हत्केलामा साना रेखाहरूको नि’शानले व्यक्तिको सौ’भाग्य बढाउँछ। हत्केलामा यस्तो शुभ चिह्न हुने व्यक्तिले सुखसुविधा र मानसम्मान प्राप्त गर्छन्। यस्तै एक शुभ चिह्न त्रिशूल पनि हो। शुक्र पर्वतमा त्रिशूल भएमा व्यक्तिले जीवनमा साँचो प्रेम पाउँछ। यस्तो व्यक्तिले अरूको भावना बुझ्छ।
शुक्र प’र्वत बूढी औंलाको ठी’कमुनि हुन्छ र जी’वनरेखाले यसलाई घे’रेको हुन्छ। कसैको हत्केलामा रहेको मंगल पर्वतमा त्रि’शूल भएमा व्यक्ति क’डा मे’हनत गरेपछि धनी हुन्छ। मंगल पर्वत ह’त्केलामा दुई ठाउँमा हुन्छन्। एक मंगल पर्वत गुरु पर्वत र शुक्र प’र्वतको बीचमा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ चन्द्र पर्वत र बुध पर्वतको बीचमा हुन्छ। चन्द्र पर्वतमा त्रिशूल छ भने व्यक्ति क’ल्पनाशील र र’चनात्मक हुन्छ। यो पर्वत बूढी औंला र शुक्र पर्वतको ठीकअघि हत्केलाको अर्कोपट्टि हुन्छ। कान्छी औंलाको मु’न्तिर बुध पर्वत हुन्छ।
बुध पर्वत’मा त्रिशूल भएमा व्यक्ति बु’द्धिमान हुन्छ र बुद्धि खि’याएर धनी बन्छ। गुरु पर्वतमा त्रिशूल भएमा व्यक्ति स’फलताका साथै प्र’सिद्धि प्राप्त गर्दछ। यो चोर औंलाको मु’न्तिर हुन्छ। माझी औंलाको मु’न्तिर शनि प’र्वत हुन्छ। शनि पर्वतमा त्’रिशूल भएमा व्यक्ति ज्ञानी र धनी हुन्छ। भिड्यो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस